शुष्मा अब बोल्ने पालो तिम्रो हो, उत्र अन्यायको विरुद्धमा… — Sanchar Kendra
शुष्मा अब बोल्ने पालो तिम्रो हो, उत्र अन्यायको विरुद्धमा…
यी अक्षरहरु लेख्दा पनि मेरो हात थरर काँपीरहेको छ । शुष्मा, अब बोल्ने पालो तिम्रो हो । थाहा छ, तिमीलाई पनि सानो चोट परेको छैन । तिम्रो जीवन खोसिएको छ, तिमि पनि जिउँदो ला’श नै भएकी छौ । तर त्यो भन्दैमा अब तिमी मौन बस्न मिल्दैन । तिम्रा प्रेमी र उनको दाजुभाइहरुको हत्यारालाई सजाय दिलाउनमा पहिलो भूमिका तिम्रो नै हुन्छ । हुनत आफ्नो आमाबुबा र आफन्तको बिपक्षमा उभिन कहाँ सजिलो हुन्छर ? तर जसरी जातीय मानसिकताबाट माथी उठेर प्रेम गर्ने हिम्मत राख्यौ अब त्यसरी नै अर्को साहस गर्ने बेला आएको छ तिमीले ।
किनकि नवराजसँग घरजम गरेर सुन्दर संसार सजाउने तिम्रो सपना चकनाचुर बनाउने तिनिहरु नै हुन् । तिम्रो प्राणप्यारो प्रेमी र उनका साथीहरुको प्राण लिने तिनिहरु नै हुन् । उनका परिवार, आफन्त साथीभाइ र दुनियाँलाई आशुको पोखरीमा डुबाउने पनि तिनिहरु नै हुन् । हुनत यो दिन आउला भनेर तिमीले कल्पना समेत गरेकी थिइनौ होला । त्यसैले त जातीय बन्धन तोडेर तिमिले नवराजलाई आफ्नो जीवनको राजकुमार बनाउने निर्णय लिएकी थियौ । तिम्रो त्यो निर्णयको म उच्च सम्मान गर्छु । अब फेरी अर्को कठोर निर्णय लिने बेला आएको छ शुष्मा ।
आफूलाई जन्म दिने आमाबुबा र समाजको सोचभन्दा तिमी बिल्कुलै अलग छौ र त विभेदको पर्खाल तोड्ने बहादुरी देखायौ । तर त्यो समाजले अब तिमीलाई त्यो स्वतन्त्रता दिदैन । जातीय मानसिकता, मानवताहिन र क्रुरताले भरिएको त्यही दलदलमा तिमीलाई फसाउने छ । खेर्ने छन्, तिमिलाई बन्धनमा पार्ने छन्, तिमीलाई ज’बर्ज’स्ती उनीहरू अनुकुल बोल्न लगाउने छन्, यतिसम्म कि तिमिलाई बलजफ्ती गर्न आएका, तिम्रो इच्छा बिपरित लैजान आएका, घरमा चोरी गर्न तोडफोड गर्न आएका, ह’ति’यार लिएर तिमीलाई उठाउन आएका आदि इत्यादि भन्न लगाउने छन् । तर तिमी सत्य बोल्नबाट नडग्मगाउ बिन्ती छ ।
ती अपराधीहरुलाई के थाहा ? तिमीहरु दुई ज्यान, दुई मुटु एक भएको, दुई ढुकढुकी एक धड्कन भएको, स्वर्ग झैँ सुन्दर संसार सजाउने सपना बुनेको, के थाहाँ तिनीहरूलाई कि हरेक सुखदुःखमा साथ निभाउने, कसम खाएको । शुष्मा ! तिम्रो नवराज जिउँदो हुँदा त साथ निभाउन पाइनौ तर अझै मौका छ, उसलाई न्याय दिलाउने । उसलाई साथ दिने वाचा पूरा गरेर उसको आत्मालाई शान्ति दिने । त्यो मौका नगुमाउ शुष्मा । तिमिले चोखो प्रेम गरेकी थियौ अपराध हैन, तर यदि हत्यारालाई सजाय दिलाउन साथ दिइनौ भने तिमी अपराधी मात्रै हैन दुनियाँमा प्रेमिकाको नाममा कलंक ठहरिने छौ । प्रेम जस्तो पबित्र शब्दमा धब्बा लाग्ने छ ।
सोच त, तिमीहरुले रोपेको निस्वार्थ प्रेमको बिरुवा बढ्न नपाई कसरी निमोठे । तिम्रो जीवन नबराजको प्राण ती अपराधीहरुले कसरी टिपे ? तिमीलाई बेहुली बनाएर घर भित्र्याउने उनको सपना कसरी तुह्याईदिए । साथीको खुशीमा रमाउन आएकाहरुलाई कसरी भेरी नदिमा बगाइदिए । जीवन तिम्रो साथमा बिताउने प्रण पूरा गर्न, तिमीलाई दिएको वचन पूरा गर्न तिमीलाई लिन आएका तिम्रो नवराजले दर्दनाक मृत्यु लिएर गए । तिम्रो काखमा हासिहासि प्राण त्याग्छु भन्ने नवराजले तिम्रो हातको एक थोपा पानी पनि निल्न नपाई नदीको बगरमा कष्टपूर्ण मृत्युवर्ण गरे ।
सोच त तिम्रो प्राणभन्दा प्यारो नवराज र उनका सथीहरुको परिवारलाई । घरमा लक्ष्मी दुलही लिएर आउँछ भन्दै बाटो कुरेर बसेकी ती बुढी आमालाई । उनीहरु यतिबेला आँसुको पोखरीमा डुबेका छन् । आफ्नो छोरा गुमाएका आमाहरुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अन्दाजा पनि लगाउन सकिँदैन । त्यो तिमीले पनि बुझेकी छौ । देशको सेवा गरेर आमालाई खुशी राख्छु भन्दै नेपाल प्रहरीमा भर्ती भएका ती जवान आफ्नी आमाको काखबाट मात्रै होइन नेपाल आमाको काखबाट खोसिएका छन् । बुढी आमाको सहारा गुमेको छ ।
फेरि पनि भन्छु, शुष्मा ! नवराजसँग गाउँ, पाखापखेरा डुलेको सम्झ । संगै पढ्न गएको सम्झ । उसको जन्मदिनमा सबैभन्दा पहिला उपहार लिएर उसको घर गएको सम्झ । उनिसँग मिठामिठा पिरतिका कुरा गरेको सम्झ । उसँग हासेको, खेलेको, रमाएको दिनहरु सम्झ । अनि रगतमा लत्पतिएको तोम्रो नवरजलाई सम्झ । तिनै नवराजको प्राण लिने दुष्टहरुलाई सम्झ । तिमी बोल्ने बेला आएको छ । तिम्रा अमाबुबा हुन् वा गाउँले कसैलाई नछोड । अपराधीलाई सजाय दिलाउ । मौन नबस । अन्यायको विरुद्धमा उत्र ।
ब्लग सँग सम्बन्धित
वेदकोट नगरपालिकामा भएका ५ वर्षका महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु
बहिरोपन गराउने ‘लासा भाइरस’ भेटियो, नेपाल कति जोखिममा ?
आफ्ना नेताको निधनमा कार्यकर्ताको मार्मिक स्टाटस, अलबिदा प्रिय कमरेड बिरजङ्ग !
यस कारण धर्म लागुऔसध हो, धर्मबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण
गरिबी किन हुन्छ, पूँजिवादले कसरी बढाउँछ गरिबी ?
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्ने ५ तरिका
सपनामा रमाएको रात
हिजोको महान जनयुद्ध र आजको संकट